Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovaom-panjakana » Espaina sy Arabia Saodita mahita lalana mankany amin'ny UNWTO
Associations News • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • Vaovao Mafana Arabia Saodita • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny antso voalohany dia ny printsy satro-boninahitr'i Saudi Arabia niaraka tamin'ny praiminisitra Espaniôla.
Ny antso faharoa dia ny sekretera jeneralin'ny UNWTO.
Ny antso fahatelo teo amin'ny minisitry ny fizahan-tany Espaniôla sy ny Saodiana androany dia nahatonga ny MOU iray sonia tamin'ity volana ity tao Riyadh manisy tombo-kase ny ho avin'ny UNWTO.
Ny fikasan'ny governemanta Saudi Arabia hanery an'i fofamindran-toerana ny World Tourism Organization (UNWTO) avy any Madrid ka hatrany Riyadh dia najanona tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity.
Ny praiminisitra espaniola, ny printsy satro-boninahitra Saodiana, ary ny sekretera jeneralin'ny Firenena Mikambana dia niditra an-tsehatra tamin'ny fisorohana izany fangatahana ofisialy izany.
Androany IZY Ahmed Al Khateeb Minisitra of Tourism of Arabia Saoditaa dia nifanakalo hevitra tamin'ny minisitry ny fizahantany espaniola, HE Reyes Maroto.
Raha ny loharanom-baovao eTN dia nandeha tsara ny fihaonana virtoaly nifanaovan'ny minisitry ny fizahantany roa avy any Arabia Saodita sy Espana tamin'ny zoma.
Ny toerana misy an'i Saudi Arabia dia ny UNWTO hatrany no mitana andraikitra lehibe sy mahomby kokoa hanohanana ireo firenena an-dalam-pandrosoana. Arabia Saodita dia manery ny fanampiana bebe kokoa ho an'ny UNWTO avy amin'i Espana, firenena fampiantranoana ny masoivohon'ny fikambanana mikambana.
Ny loharanom-baovao eTN dia nampahafantatra ihany koa fa hisy ny fanambarana iraisana mety amin'ny fiandohan'ny herinandro ho avy izao, miaraka amin'ny minisitra Espaniola mety handeha ho any Riyadh hanao sonia ny MOU amin'ity volana ity.
Ity dingana ity dia manan-danja ary afaka jerena ho fahombiazan'ny ezaka nataon'ny minisitra Saudi Arabia, izay hita fa nitety an'izao tontolo izao, nanatrika ireo hetsika UNWTO isam-paritra nanerana an'izao tontolo izao, ary ireo fandraisana andraikitra lehibe hafa.
Ny minisitra dia nahavita nanjary VIP indrindra momba ny fizahantany eto amin'izao tontolo izao, miaraka amin'ny fireneny vonona handany vola an'arivony tapitrisa dolara hanampiana ny indostrian'ny fizahantany manerantany. Arabia Saodita dia niambina manokana ny firenena maro tany amin'ny tany an-dalam-pandrosoana mba hanampy azy ireo hitantana ny indostrian'ny fizahan-tany amin'ny toe-karena toy izany amin'ny alàlan'ny areti-mandringana.
Mandritra izany fotoana izany, ny UNWTO dia hita fa tsy mandaitra be eo ambanin'ny malemy ary milaza ny sasany fa mpitondra mifanipaka. Ny fifidianana ny sekretera jeneraly ankehitriny dia hitan'ny sekretera jeneraly roa teo aloha fa tsy tomombana sy tsy manankery.